हिमालयन बैंकसंग मर्ज गर्न उपयुक्त बैंक इन्भेष्टमेन्ट पनि हुन सक्छ « Tattatokhabar
हाम्रो प्राथमिकता एफडीमा राख्ने होईन, केहि प्रतिशत घटाउँछौँ
तपाई आएपछि सञ्चय कोषमा के–के काम भए ?
निरन्तर गर्नुपर्ने काममा सुधार भएको छ । सञ्चय कोषको सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिमा सुधार गर्नुपर्ने, यसका विधि र प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने लगायत काममा जोड दिएको छु । भाडा व्यवस्थापन विधि थिएन, त्यो हामीले लिएका छौँ । त्यस्तै मुद्धति निक्षेपमा रकम जम्मा गर्नको लागि व्यवस्थित कार्यविधि थिएन म आएको केहि महिनाभित्रमा त्यसलाई पनि व्यवस्थित गरँे । त्यसले पारदर्शिकता र कामलाई सहजता पनि कायम गर्याे । त्यसपछि हामी प्रविधिका हिसावले अगाडी बढ्यौ । कर्मचारी सञ्चय कोषको सम्पुर्ण सेवालाई अनलाईन प्रविधिमा गएका छौँ । हाम्रो अर्वाै रुपैयाँ बैंक रिकन्सीलेशन हुन नपाएर अड्केर बसेको हुन्थ्यो । अहिले ७ दिनभित्रमा सबै रिकन्सीलेशन भईसक्छ । १०/१२ करोडभन्दा बढि कहिलेपनि रिकन्सीलेशन हुदैँनथ्यो । जवकी ४÷५ अर्व रुपैयाँ रिकन्सीलेशन हुदैँनथ्यो । त्यो स्थीतीलाई स्टाडेजिकल्ली रिकन्सीलेशन गर्ने काम गर्याैँ । कनेक्ट आइपीएसको माध्यमबाट चेक प्रणाली (बैंकबाट सञ्चयकर्तालाई दिने भुक्तानी रकमलाई बन्द) बाट उनीहरुको बैंक खातामा अनलाईबाटै पठाउने सीस्टम बनाएका छौँ । जम्मा हुनेवित्तीकै उनीहरुको मोवाईलमा म्यासेज जान्छ । चेक विस्थापन भयो, रिकन्सीलेशन व्यवस्थित भयो । अहिले आएर कोरोनाको प्रभाव परेका बेलामा त्यहिविचमा हाम्रो टिमलाई परिचालन गरेर आन्तरिक टिमबाट दुईवटा एप्लिकेशनहरु बनायौँ । एउटा एप्लिकेशनले सञ्चय कोषको विशेष सापटी मध्ये ८० प्रतिशतसम्म अनलाईनको माध्यमबाटै झिक्न पाउने भए । त्यो हाम्रो प्लानमा रहेकाले चैतमा लकडाउन भयो । बैशाखमा नै हामीले प्रयोगमा ल्यायौँ । सञ्चयकर्तालाई अनलाईनबाट सापटी दिने विकास गर्याैँ । जेष्ठको अन्तिममा आएर हामीले कनेक्ट आईपीएस प्रणालीबाट नै भुक्तानी गर्न मिल्ने बनाइयो । निकै प्रभावकारी रुपमा अघि बढिरहेको छ । अनि डेटा सर्वर राखेर ठमेलको कार्यालयमा धेरै व्यवस्थित गरेका छौँं । अहिले हामीले नेपालकै मोविलर डेटा सेण्टर आधुनिक र अटोमेटिक (स्वचालित) त्यहाँ कोहि हुँदैन । त्यस्तो व्यवस्था गरेका छौँ । हामीलाई दशाँै बर्ष सञ्चय कोषमा थपिने डाटालाई पनि त्यहि स्टोरमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ ।
सञ्चय कोषको विराटनगरमा आफ्नै स्टाण्डर्ड भवन निर्माण भईरहेको थियो म आएपछि त्यसलाई पुरा गरेँ । त्यसैगरि हाम्रो कोहलपुर र सुर्खेतमा भवन निर्माण भईरहेका छन् । पोखरा र हेटौडाको प्रक्रियामा गएको छ । त्यसको पनि डिजाईन बनिसकेको छ । त्यो पनि यो बर्षमा नै निर्माण कार्य शुरु गर्ने छौँ । त्यस्तै जनकपुर र धनगढीमा नयाँ कार्यालय खोलेका छौँ त्याहा जग्गा किनेका छौँ । अर्काे बर्षमा भवन निर्माण कार्य शुरु गर्ने छौँ । अहिले सञ्चय कोष घरजग्गा व्यवस्थापनमा लागेको छौं ।
त्यस्तै कोषले अन्य योजनामा लगानी बढाएका छौँ । हाईड्रो पावर, आवाश परियोजना, पुँजी बजार क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण सेयर किन्ने लगायतमा हाम्रो लगानी बढाएका छौँ ।
तपाई कोषमा आउँदा जुन प्लान बनाउनुभएको थियो, त्यो प्लान अनुसार काम गरिहनुभएको छ त ?
छ । त्यहि आधारमा भन्नुपर्दा मेरो पहिलो बर्ष २०७५/०७६ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अर्थ मन्त्रालयमा गर्दा पाँच वटा निकायमा हामीले पनि त्यहाँ पठाएका थियौँ । अर्थ मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा सञ्चय कोषको कार्य मात्रै उत्तम भनेर प्रमाणित गरेको छ । गएको आर्थिक बर्षमा पनि हामीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पठाईसकेका छौँ । असोजभित्रमा त्यसको परीणाम आउँछ ।
कोषमा यति ठूलो रकम छ, यो सदुपयोग भएन भन्ने गुनासो आउँछ, बैंकमा डिपोजिट राखेर ब्याज मात्रै खाएर हुन्छ ?
त्यो सदुपयोग भएन भन्ने होईन । बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा पुँजीको ठूलो संकट भएका वेलामा राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न उपाय अपनाएर पुँजी बैंकहरुलाई उपलब्ध गराएको हो । सञ्चय कोषको पुँजी त्यहाँ राखेर सञ्चय कोषले लगानी गर्दा ठूलो परियोजना वा ठूलो स्केलमा मात्रै लगानी गर्छ । साना–साना परियोजनाहरुमा लगानी गर्दा बैंकहरु मार्फत नै जानुपर्छ । त्यसकारण हामीले कुनै पाँच बर्षसम्म पनि राखेका छौँ । त्यो एउटा दिर्घकालिन स्रोत पनि भयो । २७ वटा बैंकहरु मार्फत देशभरि नै परिचालन भएको छ । त्यसलाई सदुपयोग भएको मानिन्छ । तर हाम्रो प्राथमिकता एफडीमा राख्ने होईन त्यसलाई केहि प्रतिशत घटाउँछौँ । कोभिडको कारण पैसा अलि बढेको छ तरपनि प्रतिशतका हिसावले एक चौथाई २८ प्रतिशत एफडीमा राखेका छौं । यहि विचमा अरु लगानी गरेका छाँै । लगानी निर्णय भएर स्वीकृत भएको ऋणपनि नगएपछि आईडल राख्नुपर्दैन । हामीले ९८.५ प्रतिशत भन्दा बढि रेगुलर हाम्रो लगानीमा छ पैसा । हामी ४ सय अर्वमा एक अर्व पनि आईडियल राख्दैनौ । सञ्चय कोषको शाखा र केन्द्रिय कार्यालयबाट पनि हामीले सापटी भुक्तानी दिन्छौँ । त्यसको लागि पनि सञ्चय कोष रकम अन्तिम हप्तामा आउँछ । दिनको १५ करोड जतिको हिसाव राख्नुपर्ने भएकाले डेढ, दुई अर्व रुपैयाँ ईन्ट्याक्ट रहँदैन । त्यो भन्दा बढि रकम सञ्चय कोषको रकम एकदिन पनि आईडिएल बस्दैन । आज कुनै ठाउँको पैसा म्याचुअड भयो भने आजसम्मको ब्याज त्यहाँबाट आउँछ ।
कति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कोषको एफडी छ ?
विभिन्न बैंक वित्तिय संस्थामा गरी एक खर्व रुपैयाँ प्लस छ ।
तपाईँ हिमालयन बैंकको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, कर्मचारी सञ्चय कोषमा सीईओ हुनुहुन्छ । सञ्चय कोषले लगानी गर्ने र बैंकले लगानी गर्ने उस्तै उस्तै बरोअर हुन्छ, भनेपछि यसमा कन्फिलीट अफ ईन्टेस्ट हुँदैन ?
मैले अहिलेसम्म त्यस्तो अफ्ठयारो महशुस गरेको छैन । बैंकहरुले लगानी गर्ने कुरा धेरै कम मात्रै बोर्डमा आउँछ । दुई अर्ब सम्मको लगानी गर्ने अख्तियारी सबै सीईओलाई दिएको हुन्छ । त्यसकारण कहाँ कहाँ लगानी भयो भन्ने अडिटरले हेर्छ । म हिमालयन बैंकमा सञ्चय कोषको प्रतिनिधिको रुपमा गएको हुँ । म लगानीकर्ताको रुपमा प्रतिनिधि हो । बैंकमा जाँदाखेरी बैंकको हिसावले गएको हो । यहाँ आउँदा सञ्चय कोषको प्रशासकको रुपमा भएर आएको हुँ । त्यसमा हाम्रो कन्फिलीट भन्ने कुरा केहि पनि छैन । किनभने उसको आफ्नो विधि विधान छ । यहाँ पनि मेरो लगानी भएको र त्यहाँ पनि मेरो लगानी भएको भए त्यस्तो हुनथ्यो । नीतिगत, कानुनीरुपमा स्थापित संस्थाको प्रशासक भएका कारणले मेरो निस्पक्षता रहन्छ । मैले बैंकमा गरेको काम स्याडोका हिसावले हुन्छ । काम देखिन्छ तर व्यक्तिगत पहिचान नदेखाएर काम गर्छाैँ । मलाई बैंकको सञ्चालक भएको हिसावले कोषले पठायो बैंकको सञ्चालक समितिले अध्यक्ष छान्यो । मैले जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छुँ ।
तर अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि ठूलो हुन्छ, यता पनि ठूलो नै हो कसरी व्यवस्थापन गरिहनु भएको छ ?
अध्यक्षको जिम्मेवारी एकदम लिमिटेड हुन्छ । किनभने बोर्डले दिने भनेको तीनवटा कुरा हो । नीति, बार्षिक रुपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र त्यसको लागि चाहिने बजेट र बजेट सञ्चालनको लागि म्याण्डेट चाहिन्छ । त्यहाँका नीति, निर्देशिका, नियमावलि हामीले पास गर्ने, बजेट पास गरिदिन्छौ । त्यो बजेट र कार्यक्रमहरु जुन नीति नियम अनुसार गर्नपर्ने काम हो त्यो कामको अख्तियारीकोे व्यवस्थापकलाई दिन्छ । अनि सीईओसंग एमओयु गर्छाैँ । सम्झौता अनुसार काम भएको छ वा छैन भनेर मुल्याङ्कन गर्छाै त्यति हो ।
तपाईँ आएपछि सेयर बजारमा ठूलो लगानी थपिएको रहेछ, किन त्यस्तो भएको ?
त्यस्तो ठूलो छैन । सञ्चय कोषको पुँजीको हिसावले ७ प्रतिशत मात्रै हो । हामी १५ प्रतिशतसम्म जानहुन्छ भन्ने प्लान हो । अझै उपयुक्त कम्पनी पायो भने लगानी थप्न सक्छौं । त्यसमा दुई कारण छ । हाम्रो पुँजी सही लगानी हुन्छ । त्यसको रिस्क हेरेर जान्छौ । अहिलेसम्म सबैभन्दा राम्रो रिटर्न पुँजी बजारबाट छ । दोस्रो कुरा हाम्रो पुँजी बजार सानो छ, अहिले बढ्दै छ । त्यसमा ठूलो लगानी गर्नुपर्याेँ भने ब्यक्तिले गर्न सत्तैन लगानी गर्न संस्था नै आउनुपर्छ । त्यो संस्थाको रुपमा हामी पनि जान्छौ । त्यसमा अस्वस्थ्य प्रस्पिर्धामा गर्दैनौं । हामी कम्पनी र बजार एनालाईसीस गरेर उपयुक्त ठानेर मात्रै गर्छांै । अहिलेसम्म पनि पव्लिकबाट कोषले गलत ठाउँमा लगानी गर्याें भनेर गुनासो आएको छैन । सरकारले पुँजी बजार बढाउनुपर्छ भनेको छ । गत बर्ष ५८ औं बार्षिक उत्सव मनाईरहँदा अर्थ मन्त्रीज्यूले पनि पुँजी बजारको क्षेत्रमा ध्यान दिएका छन् । विदेशमा हेर्ने हो भने ५० देखी ७५ प्रतिशत पुँजी सेयर मार्केटमा हुन्छ । हाम्रो त धेरै सानो छ यसलाई बढाउने सम्भावना छ । एकदम थोरै गरेर अनुभव गरेर विस्तारै बढिरहेका छौँ ।
पुँजी बजारमा कति लगानी छ ?
टोटल ५ अर्व रुपैयाँ लगानी रहेको छ । हिसाव गर्दा टोटल भ्याल्यू २५ अर्व जति पुग्यो होला । तर हाम्रो लगानी ५ प्रतिशत मात्रै छ ।
बीओके र सिभिल बैंकको पनि धेरै सेयर किन्नु भयो ?
हो । बैंक अफ काठमाडूंको पहिले पनि थियो । एकदम रिजनेवल प्राईजमा पाएको हुनाले किनेको हो । सिभिलको ठूलो सेयर होल्डर हामी हाँै । सिभिललाई व्यवस्थापन गर्ने, सुधार गर्नुपर्ने, कहिँ कुनै राम्रो बैंकसंग मर्ज गर्ने हिसावले पनि हामी अफर गर्न लागेका छौँ । भोली हाम्रो लगानीले राम्रो प्रतिफल देला भन्ने लाग्छ । हामीले १० बर्ष पहिले स्थापना गरेको बैंकको सय रुपैयाँको सेयरलाई सय रुपैयाँमा नै किनेका छौँ । सिभिल बैंकको सेयर ८ बर्ष अगाडी लगानी गरेको भएपनि त्यहि सय रुपैयाँ हुन्थ्यो भने ८ बर्षपछि पनि त्यति नै भ्याल्यूमा पायौँ ।
सञ्चय कोषले लगानी गरेको अरु बैंकहरुमा संचालक पनि पठाउँछ ?
जहाँ हाम्रो उल्लेख्य लगानी छ, त्यहाँ पठाउँछौँ । हाम्रो उल्लेख्य लगानी भएको हिमालयन बैंक १४ प्रतिशत, बैंक अफ काठमाडूं ५ प्रतिशत, एसविआई बैंक १५ प्रतिशत, सिभिल बैंक ८ प्रतिशत रहेको छ ।
हिमालयन बैंकमा मनोज बहादुर श्रेष्ठ ग्रुपलाई हटाउन राणा ग्रुपसंग मिलेको तपाईलाई आरोप छ नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । म सर्वसम्मत अध्यक्ष छानिएको हो । कसैलाई हटाउनुपर्ने र कसैलाई राख्नुपर्ने सञ्चय कोषको उदेश्य थिएन । तर स्वभाविक रुपमा हिमालयन बैंकमा सञ्चय कोषको पालो पनि आएको थियो जस्तो लागेको छ । लामो समयदेखी सञ्चय कोष त्यहाँ नेतृत्वमा पुगेको थिएन । यो उपयुक्त समय थियो होला जसले नेतृत्व पाए । मैले सर्वसम्मत रुपमा पाएको हो, चुनाव पनि भएन ।
हिमालयन बैंकलाई राष्ट्र बैंकले मर्ज गर्न दवाव दिएको भन्ने सुनिन्छ, सञ्चय कोषले लगानी गरेको अरु कुनै बैंकसंग मर्जरको सम्भावना कति छ ?
सबै बैंकहरुसंग मर्जरको उत्तिकै सम्भावना छ । हामीले एउटा हिमालयन बैंकले सञ्चालकहरुको तर्फबाट मर्जर कमिटि बनाएका छौँ । त्यसले काम गर्दै छ उनीहरुले सबै बैंकहरुको स्टडी गरेर परिणाम ल्याउँछन । त्यसमा सञ्चय कोषको लगानी रहेका वा नरहेका पनि पर्न सक्छन ।
सिभिल बैंकसंग पनि ठूलै चर्चा चलेको छ नि ?
मैले पनि हिजो मात्रै थाहा पाएको हो । उहाँहरुले एउटा प्रस्ताव मात्रै यसलाई एक्वायर गर्दा हुन्छ भनेर सिभिल बैंकको अफिसियल लेटर हिमालयन बैंकमा आएको छ भन्ने थाहा पाएको छुँ । आइकेपछि त्यसमा छलफल होला । बोर्डमा पनि छलफल गर्छाै ।
इन्भेष्टमेण्ट बैंकसंग पनि मर्ज गर्ने हल्ला चल्यो ?
इन्भेष्टमेण्ट बैंक राम्रो बैंक हो । मैले अघि भने सबै बैंकसंग चर्चा चल्ने हो । मर्ज गर्ने एउटा उपयुक्त बैंक इन्भेष्टमेन्ट पनि हुन सक्छ ।
हविव बैंकको सेयर किन्ने विषयमा जुन सीडीसि नआउने भएपछि हविव बैंकको सेयर सञ्चय कोषले नै किन्ने भन्ने चर्चा छ, सत्य हो ?
त्यस्तो औपचारिक केहि छलफल भएको छैन । कोषले उपयुक्त देखिएका प्रोफिट र सुरक्षित खालका बजारमा अप्सन आए भने हामी किन्न पनि सक्छौ । थप्न पनि सक्छौ । फेरि मर्जरको कुरा आईरहेको छ । हामी कुनै बैंकमा मर्जर भएर जाँदाखेरी हिमालयन बैंकमा हाम्रो जुन लगानी सबैभन्दा राम्रो रिटर्न आएको छ । हिमालयन बैंकबाट निरन्तर रुपमा गएको २५ बर्षमा सरदर बार्षिक ३२ प्रतिशत रिटर्न आएको छ । त्यस्तो राम्रो बैंक हुनुमा सञ्चय कोषको प्रतिनिधित्व भएर पनि हुन सक्छ । हाम्रो प्रतिनिधित्व भएर पनि त्यहाँ न्यूटल भूमिका निर्वाह गरेर प्रोफेसनल्ली भएर काम गरेको हुनाले पनि त्यो हुन सक्छ । त्यसकारण भोलीको दिनमा सीडिसी आउने र नआउने थाहा छैन । किनकी अफिसियल्ली हामीलाई केहि पनि जानकारी छैन । भोली हविव बैंकले बेच्ने हो भने हामी छलफल गर्न सक्छौँ ।
सञ्चय कोष र हविव बैंकको प्रतिनिधि विच छलफल भएको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ नि ?
सिडिसी आउने भईसकेपछि उसले बेच्ने भएकाले हाम्रो पनि स्वीकृति चाहिन्थ्यो । त्यो सन्दर्भमा छलफल भएको हो । तर यो विचमा हविव बैंकको प्रतिनिधि गत फागुन देखी नै भेटघाट नै भएको छैन । अहिले त्यस्तो छलफल चलेको छैन । अनुकुल समयमा कुरा चल्छ होला ।
हबिवको सेयर किनेर हिमालयन बैंकमा १५ प्रतिशतबाट लगानी बढाउने प्लान छ ?
हामीलाई बढिमा २५ प्रतिशत सेयर राख्न मिल्छ । ऐनले २५ प्रतिशतभन्दा बढि लगानी गर्न पाइदैन । हबिबले सेयर बेच्ने भए संचय कोषलाई मात्र बेच्ने कुरा हुँदैन अरुलाइ पनि बेच्न सक्छ । अरु १० प्रतिशत कसले किन्छ त्यहाँ धेरै पार्टनरहरु छन् । पहिलो च्वाईस त्यहाँ भएका ईक्यूटी होल्डरहरुछन् उहाँहरुमा जाने हो । अफर उहाँहरुले किन्नुभयो भने सबैले अनुपातको रुपमा सेयर मिलाउने हो । कसले कति लिने भन्ने कुरा आयो भने हामी बढिमा १०÷११ प्रतिशत लिन सकिन्छ ।
हबिबको सेयर प्राइसमा कुनै कुरा भएको छ ?
कुरा नै अगाडी बढेको छैन । अनुमान के हो भने २.६ डलर परसेयर का दरले हबिवले सिडिसीलाई बेच्न खोजेको थियो भन्ने हबिव बैंकको प्रतिनिधिबाट मैले थाहा पाएको हो । त्यो गत बर्षको कुरा हो । अहिले परिस्थिती फरक भएको छ । प्राईसको कुरामा पहिले उनीहरुले बेच्ने हुनुपर्यो । त्यसपछि किन्ने र बेच्ने इच्छुक पाटी भयो भने मिल्छ । प्राईज त रिजनेवल भयो भने हामीले किन्ने कुरा हो, यदि महंगोमा आयो भने किन्ने कुरा हुँदैन ।
इन्भेष्टमेण्ट बैंकसंग मर्ज गर्न गर्न सीईओ, अध्यक्ष सबै कुरा मिलिसक्यो भन्ने सुनिन्छ नि ?
हामीले मर्जर कमिटि बनाएका छौँ । प्रोसेशहरु शुरु गर्यो होला, छलफल गर्यो होला । त्यसले टाईम टु टाइम रिपोर्ट गर्छ । कमिटिले सम्भावित तीन बैंकहरुको सूची तयार पार्छन । त्यसपछि हामीले छलफल अगाडी बढाउँछौ । मुख्य कुरा मिलेपछि अरु पछिका कुरा हुन् । तर ति पनि महत्वपुर्ण कुरा होलान । सञ्चय कोषको हकमा हामी स्वतन्त्र छौं । बैंक राम्रो होस, राम्रो बैंकसंग मर्जर होस, सञ्चयकर्ताको लगानी त्यसमा सुरक्षित होस, प्रतिफल राम्रो दिन सक्यो भने हामीलाई अरु कुरा चाहिएको छैन ।
तपाई सञ्चय कोषमा आएको दुई बर्षमा एग्रेसिभली काम गर्नुभयो तर हिमालयन बैंकमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, बैंक त एग्रेसिभ छैन किन ?
त्यो रोलमा भूमिका पर्दछ । म त्यहाँको सीईओ भएको भए साना साना एक्टिभिटीहरुमा काम गर्नुपथ्र्योे होला । तर बोर्ड भनेको दुई महिनाको एक चोटी मिटिङ बस्छ ।